Qarax ay Dad ku dhinteen oo Xeryaha Qaxootiga Soomaalida ee Kenya ka dhacay
Xagar-Dheer (Alshahid)- Qarax sababay Dhimashada illaa Laba Ruux ayaa ka dhacay Xerada Xagar-Dheer ee dalka Kenya, halkaas oo ka mida Xeryaha ay Mudada dheer ku noolaayeen Qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya u cararay wixii ka dambeeyay Dagaalada Sokeeye. Goob joogayaal ayaa Warbaahinta u sheegay in Laba Ruux ay ku dhinteen Qarax Xalay ka dhacay gudaha Xerada, [...]
Madaxweyne Xassan Sheikh oo Bangiga Aduunka ka codsaday inuu taageero Bangiyada Somalia
Washington (Alshahid)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia Mudane Xassan Sheikh Maxamuud ayaa Bangiga Aduunka ka codsaday inuu gacan ka geeysto sidii loosoo celin lahaa Adeeggii Bangiga ee Somalia. Madaxweynaha ayaa Codsigan u gudbiyay Madaxweynaha Bangiga Aduunka Mr. Jiim Yoon Kiin. Waxaana Kulanka labada mas’uul uu ka dhacay Wadanka Mareykanka. Sida lagasoo xigtay Cabdi-Salaam Abukar oo ah Gudoomiyaha [...]
Ciidamada dowladda oo Howlgalo isdaba joog ah ka haya Muqdisho
Mogadishu (Alshahid)- Waxaa maalmahanba magaalada Muqdisho ka soconayay howlgalo baahsan oo ay Ciidamada Dowladda Somalia sameynayeen. Howlgalada ayaa waxaa ka qayb qaadanaya Ciidamada Booliska iyo kuwa Nabad Sugida, waxayna Guryaha iyo goobaha dadweynaha u galayeen si ay u baaraan waxyaabaha ay uga shakiyaan inay amni darada qayb ka yihiin. Degmooyin badan ayeey Maalmihii lasoo dhaafay [...]
Alshabab oo qudha ka jaray Muwaadinkii Faransiiska ahaa ee gacantooda mudada ku jiray
Mogadishu (Alshahid)- Warar iminka kasoo baxay Kooxda Alshabab ayaa lagu sheegay inay Kooxdu Toogasho ku dishay La heystihii Faransiiska ahaa ee gacanteeda mudada Sanadaha ah ku jiray, kaas oo lagu magacaabi jirayDenis Alex. Wararkan oo lagu baahiyay Shabakadda Internetka gaar ahaanna Bogg ay Shabaabku ku leeyihiin Twitter-ka ayaa waxaa lagu xusay inay Kooxdu toogatay Denis [...]
Maxkamadda Ciidamada oo digniin u jeedisay Askarta iyo kuwa Dharkooda ku labista
Mogadishu (Alshahid)- Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Somalia ayaa Ciidamada iyo Ragga Dharkooda ku labistaba uga digtay inay ku kacaan Falal lagu waxyeeleynayo Rayidka. Gudoomiyaha Maxkamadda Liibaan Cali Yarow oo ka hadlayay goob lagu toognayay Laba Askari oo ay Maxkamaddu Xukuntay markii lagu eedeeyay inay Kufsi iyo Dilal geysteen ayaa wuxuu Ciidamada kale uga digay [...]
Alshabab oo Falkii Rayidka ay AMISOM ku laayeen ku sheegtay mid loogu aar gudayay Faransiiska
Mogadishu (Alshahid)- Kooxda Alshabab ayaa shaaca ka qaadday in Ciidamada AMISOM ay laayeen Rayid Soomaaliyeed iyagoo doonaya inay u aar gudaan Askar Faransiis ah oo dhawaan Alshababku ay ku dileen degmada Buula-Mareer ee gobalka Shabeelaha Hoose. Gudoomiyaha Alshabab ee gobalka Shabeelaha Hoose Sheikh Maxamed Abu Cabdalla oo Warfidiyeenka la hadlayay ayaa wax laga xumaado ku [...]
Wasiirka Gaashaandhiga oo Turkiga ugaga qayb galaya Shir looga hadlayo dib u dhiska Ciidanka Somalia
Mogadishu (Alshahid)- Wasiirka Difaaca ee Somalia Mudane Cabdi Xakiim Xaaji Maxamuud Faqi ayaa ka dhoofay dalka, isagoo kusii jeeda Wadanka Turkiga, halkaas oo uu kaga qayb galayo Shir looga hadlayo arrimaha Ciidamada Somalia iyo dib u dhiskooda. Wasiirka ayaa Maalin ka hor kasoo laabtay Safarro uu dalalka Kenya iyo Uganda u tagay, halkaas oo uu [...]
Dagaal ka dhacay degmada Afmadow
Afmadow (Alshahid)- Wararka ka imaanaya magaalada Afmadow ee gobalka Jubada Hoose ayaa sheegaya in Dagaal uu halkaas maanta ku dhex maray Maliishiyaad ka wada tirsan Kooxda Raas-Kambooni oo ka mida Kooxaha hubaysan ee gobaladaas ku sugan. Dad goob joogayaal ah ayaa Warbaahinta u sheegay in Dagaalka uu yimid ka gadaal markii Maliishiyaad Raas-Kambooni taabacsan ay [...]
La heystihii Faransiiska ahaa ee Gacanta Alshabab ku jiray oo Xukun Dil ah loo diyaarinayo
Mogadishu (Alshahid)- War kasoo baxay Kooxda Alshabab ayaa lagu sheegay inay Kooxdu qorsheyneyso sidii ay Xukun Dil ah ugu ridi lahayd La heyste Faransiis ah oo mudo Saddex Sano ku dhaw gacanteeda ku jiray. La heystahan oo lagu magacaabo Danis Alex ayaa ahaa Ninkii isaga dartiis ay Ciidamada Kumaandooska Faransiisku dhawaan usoo weerareen deegaanka Buula-Mareer [...]
Ciiamada AMISOM oo baaris ku samaynaya Fal ay Askartoodu ku dileen tiro dad rayid ah
Mogadishu (Alshahid)- Ciidamada AMISOM ee ku sugan Somalia ayaa shaaca ka qaaday inay samaynayaan baaritaanno la xiriira sababta keentay in Askartooda qaar ka mida ay Dil u geeystaan Dad rayid ah oo ku sugnaa gobalka Shabeelaha Hoose. Dilka dadkaas ayaa Shalay ka dhacay deegaanka Leego ee gobalkaas. Waxayna Saraakiisha AMISOM xuseen in la daba galayo [...]